warkii.com » Bruno Fernandes Oo Ka Cadhaysan Magaciisa Oo La Qalday: “Maxaad Magayga Sidaa U Odhanaysaan”
Bruno Fernandes Oo Ka Cadhaysan Magaciisa Oo La Qalday: “Maxaad Magayga Sidaa U Odhanaysaan”
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Manchester United ee Bruno Fernandes waxa uu magaciisu ku dhacay dhegaha inta badan dadka xiiseeya kubadda cagta, gaar ahaan reer Manchester United, laakiin haddana waxa uu laacibkani khaati ka taagan yahay sida loogu dhawaaqayo magaciisa.
Bruno Fernandes oo bishii January kusoo biiray Manchester United, waxa uu u horseeday kooxdiisa in aan laga badinin 19 ciyaarood oo xidhiidh ah, isla markaan ay sare usoo ruqaansadeen oo ay isku dhibco noqdeen Leicester City oo farqiga goolasha kaga horreysa, laakiin waxay fursad u haystaan kulanka ugu dambeeya xili ciyaareedka oo ay labadoodu isku hadhsan yihiin.
Kubbad-sameeyaha reer Portugal oo ka hadlayay telefishanka BT Sports, kaddib markii ay dhamaatay ciyaartii ay ku garaaceen Crystal Palace, waxa uu soo bandhigay sida uu uga xun yahay in illaa hadda ay warbaahintu baran la’yihiin magaciisa oo ay si qaldan ugu dhowaaqayaan.
Bruno Fernandes waxa uu dadka sida qaldan magaciisa ugu dhowaaqaya u sheegay sida saxda ah ee ay tahay in loogu dhawaaqo, waxaanu yidhi: “Waa inaad tidhaahdaan Fur-nandsh”.
Laacibka kale ee khadka dhexe uga ciyaara Manchester United ee Fred ayaa sida Bruno Fernandes oo kale u dhibsaday intii uu joogay Shakhtar Donetsk qaabka ay ugu dhawaaqi jireen magaciisa, waxaana muuqaal uu soo duubay uu ku sheegay in loogu yeedhi jiray “Frej” iyo mararka qaarkood oo xataa la odhan jiray “Fredge”.